Zava-mahadomelina mameno ny tanàna Rongony 300 kg tra-tehaka tany Betroka
Mihanaka be ny rongony. Andrasana ny fepetra hentitra hanafoanana ity loza mandondona ny firenena ity. Efa hitovy tsy misy valaka amin’ireo tany miady sy hanatanterahana trafikana zavamahadomelina i Madagasikara.
Rongony 6 gony milanja 300 kg eo no saron'ny zandary tao Fangorolava, fokontany Ambalamary, any Betroka. Tafaporitsaka kosa ireo telo lahy nilanja azy izay mitondra fitaovam-piadiana samy hafa. Kasaina haondrana any Andiolava moa ireo rongony ireo. Toerana lalovan'ny zava-mahadomelina toy itony matetika ny kaominin'i Jangany satria sarotra ho an'ireo mpanondrana azy ny lalam-pirenena faha-13, vokatry ny fisavana hentitra ataon'ny mpitandro ny filaminana. Tsy maintsy atao, hoy ny Commandant Peloton ao Jangany ny fanenjehana sy fanondranana ny zava-mahadomelina toy ny rongony hampisy ny fandriampahalemana tany Betroka, akoatra ny fandraran'ny lalàna ny fanondranana sy ny fifohana azy. Ireo mpitondra no tratra hatreto fa raha ny atidohan’ny trafikana rongony tsy mbola nisy fampitam-baovao mangirana. Ireo mpijirika madinika ihany koa no tafiditra anaty haraton’ny mpitandro filaminana fa ny mpambongady mbola mijanona ho mistery.